Apple inoona inopfuura miriyoni kushambadzira yezvinhu zvekunyepedzera | Ndinobva mac
Apple inoona inopfuura miriyoni kushambadza pane yekunyepedzera accessories network
Vagadziri vezvinhu zvekunyepedzera vane tsinga chaiyo ne accessories Apple mavambo. Izvo zvigadzirwa zvinodhura zvakanyanya kune izvo zvavari, izvo zvinogona kutevedzwa zviri nyore. Hapana anogona kunyepera iPhone, kana iyo iPad, asi MagSafe charger, Apple Watch tambo, uye kunyange AirPods, mamwe acho ari ekunze akafanana uye anenge asingakwanise kuzivikanwa.
Apple ine timu yevanamakanika vakazvipira kutsvaga zvekunyepedzera zvishandiso kuburikidza neshambadziro pasocial media uye vechipiri-ruoko mafomu. Zvakanaka, vanotova nezvakawanda kudarika miriyoni kushambadza yakawanikwa yezvigadzirwa zvemanyepo zveApple. Iyo jira.
Icho chinhu chimwe kutengeswa mahedhifoni akafanana neayo AirPods, nemutengo wakaderera, kubva kune mumwe mugadziri. Unovatengera uchiziva kuti havasi vanobva kuApple, vachiziva hunhu hwavanogona kukupa zvinoenderana nemutengo wawakabhadhara, uye vanogona kuzadzikisa zvaunotarisira. Parizvino, zvakakwana.
Uye chimwe chinhu chakasiyana kwazvo ndechekuti iwe unotenga manyepo AirPods Pro, uchitenda kuti ndezvechokwadi. Nemutengo wakafanana kana wakaderera zvishoma pane iwo mavambo, uye nebhokisi uye zvese zvinhu zvaro zvakanyatsofanana neiya yakagadzirirwa muCalifornia. Asi kana iwe ukavaedza pairi uye ukaona kuti ruzha runosiya zvakanyanya kudiwa, ivo havana ruzha kukanzurwa, uye bhatiri rinogara kwekugomera, unoona kuti une kubiridzirwa.
Dzimwe feki dzakanaka chaizvo uye dzakaoma kuzivisa kunze.
Izvi ndizvo zvinonzi timu ye trackers Apple inoda kudzivirira hutsotsi chero zvodii. Bloomberg ichangoburitsa a chinyorwa kwaanotaura nezvechikamu ichi chevashandi veApple. Mugore rapfuura vakaona uye vakabvisa zvinopfuura miriyoni kushambadzira kweenhema Apple accessories, zvakaburitswa pamasocial network, senge Instagram kana Facebook, kana zvekutengesa nekutenga kunyorera.
Unofanira kungotenga-tarisa Wallapop o EBay, uye ona kuti mangani maAirPod uye AirPods Pro zvinotengeswa zvakavharwa zvisina kushandiswa pamutengo wakanaka. Chokwadi mamwe ndeekutanga, asi pachavewo nevaya vanoda kukupa nguruve yetsuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple inoona inopfuura miriyoni kushambadza pane yekunyepedzera accessories network
Nomad dhisikaundi inosvika makumi maviri muzana muchikamu chayo chokubuda
Mhete Alarm 2 uye Mhete Alarm Kunze Siren uye Sleek yakaunzwa